Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): ၀င်းယဆရာတော်နှင့်ပတ်သက်တဲ့ အစီးအဝေးမှတ်တမ်းနဲ့ ရေးလာတဲ့ပေးစာ
ဒီအစီးအဝေးမှတ်တမ်းဟာ PNO ရုံးက လူကြီးတွေနဲ့ ခမ်းဗွေး (ဒေသအခေါ် လူကြီး) တို့က ၀င်းယရွာသား အနည်းငယ်ကို စည်းရုံးဖြားယောင်းပြီး တစ်ဘက်သတ်လိမ်ညာရေးသား စွပ်စွဲထားတဲ့စာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပအိုဝ်းဘာသာ နဲ့ရေးထားတာပါ။ အဲဒီရေးထားတဲ့စာတွေအထဲမှာ ရုံးက ပထမတစ်ခါ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေ၊ ပအိုဝ်းဆီဆိုင်ဆရာတော်က ထိုကဲ့သို့ မပြုလုပ်ဖို့ မိန့်ကြားတာတွေကို ထည့်တွင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရဘူး။ အဲဒီရွာက အကြောင်းတွေကို တိတိကျကျ မသိတဲ့သူတွေက ဒီစာကိုဖတ်ရင် သူတို့အမှန်လို့ထင်အောင် အကွက်ဆင်ရေးထားတာပါ။ ရုံးကစာရေး ခွန်ဟိန်းထွန်းနဲ့ ခွန်ဟိန်းထွန်းရဲ့ မိတ်ဆွေ ခွန်တိုးယံတို့က ရေးပေးတာပါ။ ရေးပေးတဲ့အကြောင်းက ငွေရေးကြေးရေးကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ ဟိန်းထွန်းက စီးပွားရေးကျပ်တည်းသူဖြစ်တော့ ငွေကို မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ ရှာနေရတဲ့အချိန်လဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကျောင်းအပ်ရတော့မယ်လေ။ ခွန်တိုးယံဆိုသူကတော့ အရင်က ၀င်းယကျောင်းထိုင်ဖြစ်ပြီး မိန်းမကိစ္စကြောင့် ရွာက အနှင်ခံထားရတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိန်းထွန်း အဲဒီဝင်းကျောင်းက ဘုန်းကြီးလူထွက်ပါပဲ။ ဟိန်းထွန်း ဘုန်းကြီးဘ၀တုန်းက ပညာအရည်အချင်းအရ ၀င်းယကျောင်းကို ထိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒကာအများက သဘောမကျတဲ့အတွက် ကျောင်းထိုင် မဖြစ်လိုက်ရပါဘူး။ ခုလက်ရှိထိုင်နေတဲ့ ဦးသြဘာသကိုသာ ရွာသားဒကာတွေက ရွေးလိုက်တော့ ဟိန်းထွန်း (ဦးသီရီညာဏ) နဲ့ သူဆွေမျိုးတွေက ကျောင်းထိုင်နေရာကို ရသွားတဲ့ ဦးသြဘာသကို မကျေနပ်ကြပါဘူး။ ခုလဲ အဲဒီအငြိုးတွေနဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ဘုန်းကြီးကို တဘက်သတ် စွပ်စွဲလိုက်တာပါ။ နောက်အကြောင်းတွေကတော့ ဟိန်းထွန်းအစ်ကို အောင်လှ ဆိုသူနဲ့ ၀င်းယဆရာတော် ဦးသြဘာသက အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါကြောင့် အောင်လှက ရုံးစာပုံစံ အရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ သူ့ညီကို ငွေပေးပြီး လူကြီးတွေ မယုံ ယုံအောင် တစ်ဘက်သတ်ရေးခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိန်းထွန်းနဲ့ တိုးယံ တို့ဟာ ပအိုဝ်းလူကြီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးတော့ ပအိုဝ်းလူကြီးတွေကလဲ သူတို့စကားဆို အကုန်
ယုံပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀င်းယဆရာတော်မှာ အပြစ်ကြီးကြီးမားမား မရှိပါဘဲ ကျောင်းကထွက်ဖို့ ဖိအားပေးခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသားတွေ မကျေနပ်ကြပေမဲ့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။
Now we r pa-o people alway lost humen right with our pno why they attack to our people like that fucken to pno now they only care there business hey taunggyi time can u tell the pno leadership the monther fucker to them ok!
လိုယိုန၀်ပေါးနီမာထာဟောဝ်တဲ့လိုဟောဝ်ဖုံးအ၀်းအွဉ်းဟောဝ်အွဉ်းရဲခါဒျား ပေါးနီမာထာတဟ၀်တ၀်းန၀်ရိုမွုန်းတ၀်းဇာတ်ငါ ၀ဠ်ကရိုန၀်အီးဖေးစွဉ်းဘ၀ဇာတ်ယိုခါခါသွူ ဖေးအား
လိုမွိုက်လိုရွိုင်သီးတနားတ၀်း လွောက်လွဉ်တော့ထာတဟ၀်တ၀်းဖဲ့န၀်တဲ့ အကျိုယိန်းဆုတ်ယုတ်န၀်သွူ ပေါးလိတ်ဖတ်ပုဂိုလ်းသီး
မတရားတာတွေကို အရင်လို မျိုးဆက်မလုပ်စေချင်တော့ဘူး အရင်က ဖုံးကွယ်လို့ရတယ် ခု အင်တာနက်ခေတ်မှာ မရတော့ဘူးနော် အကုန်သိတယ် ...
လူကြီး / အာဏာ နိုင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပီလား ဥပဒေကကော ဘယ်လိုလဲ ခုခေတ်က နားမလည်နိုင်တော့ဘူး...
မျက်စိကိုဖွင့် နားကိုစွင့်ပီးတော့မှ လူတကာကိုဝေဖန်ပါ.
၂၀၁၄ ခု ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည်
ဧပြီလ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၃ | တောင်ကြီးတိုင်းမ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ အာဆီယံလူထု အဖွဲ့အစည်း ညီလာခံနှင့် အာဆီယံပီးပေါးဖိုရမ် (ASEAN Civil Soci...